Shina fambolena oksizenina PSA ambony kalita amidy any Amerika atsinanana atsinanana Asiawith kalitao azo antoka fa mpanamboatra sy mpamatsy mahomby be. OR
Zavamaniry oksizenina PSA ambony kalitao amidy mafana any atsimo Amerika atsinanana Asiawith kalitao azo antoka amin'ny fahombiazana avo lenta
1: Indostrian'ny taratasy sy pulp ho an'ny famotsiana sy fanalefahana oxygène
2: Indostria fitaratra ho an'ny fampiroboroboana ny lafaoro
3: Indostrian'ny metalyurgie ho an'ny fampiroboroboana ny lafaoro ny lafaoro
4: Indostria simika ho an'ny fanehoan-kevitra momba ny okidra sy ho an'ny mpandoro
5: Fitsaboana rano sy rano maloto
6: welding vy, fanapahana ary famonoana
Oksizenina dia gazy tsy misy tsirony. Tsy misy fofona na loko io. Ahitana 22% ny rivotra. Ny lasantsy dia ampahan'ny rivotra iainan'ny olona miaina. Ity singa ity dia hita ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny Masoandro, ny ranomasina ary ny atmosfera. Raha tsy misy oksizenina dia tsy ho velona ny olombelona. Izy io koa dia ampahany amin'ny tsingerin'ny fiainana kintana.
Fampiasana oksizenina mahazatra
Ity entona ity dia ampiasaina amin'ny fampiharana simika indostrialy isan-karazany. Izy io dia ampiasaina hanamboarana asidra, asidra solifara, asidra azota ary fitambarana hafa. Ny karazany miova be indrindra dia ny ozone O3. Izy io dia ampiharina amin'ny fanehoan-kevitra simika isan-karazany. Ny tanjona dia ny hampiroborobo ny tahan'ny fanehoan-kevitra sy ny fitrandrahana oksizenina tsy ilaina. Ny rivotra oksizenina mafana dia takiana amin'ny fanaovana vy sy vy amin'ny lafaoro nipoaka. Ny orinasam-pitrandrahana sasany dia mampiasa azy io handravana vato.
Fampiasana eo amin'ny indostria
Ny indostria dia mampiasa ny lasantsy amin'ny fanapahana, fangejana ary fandrendrehana metaly. Ny entona dia afaka mamorona hafanana 3000 C sy 2800 C. Ilaina izany amin'ny fanilo fanilo oxy-hydrogen sy oxy-acetylene. Ny dingam-pandaminana mahazatra dia toy izao: atambatra ny vy.
Ny lelafo maripana avo lenta dia ampiasaina hampiempo azy ireo amin'ny alàlan'ny fanafanana ny fihaonambe. Miempo sy mihamafy ny tendrony. Raha hikapa vy dia hafanaina ny tendrony iray mandra-pahatonga azy ho mena. Ny haavon'ny oxygen dia ampitomboina mandra-pahatongan'ny oksizenina mena mena. Manalefaka ny vy izy io mba hahafahany miforitra.
Ity entona ity dia takiana mba hamokarana angovo amin'ny fizotry ny indostria, ny angovo ary ny sambo. Ampiasaina amin'ny fiaramanidina sy fiara koa izy io. Amin'ny maha oxygen oksizenina azy, mandoro lasantsy sambon-danitra izy io. Izany dia mamokatra ny tosika ilaina amin'ny habakabaka. Ny habakabaky ny mpanamory habakabaka dia manana oksizenina madio.
Previous: Mpanamboatra Fitaovana Nitrogen avo lenta fahadiovana PSA Nitrogen Generator
Manaraka: Oxygène Generator Oxygène Hopitaly Oxygen Generator Oksizine Generator Oksigène medikaly
Oxygène misy ranoka tsara indrindra sy nitroka ary zavamaniry Argon
Oxygène sy oksizenina azota tsara indrindra